Waa maxay brinicle sideese loo sameeyaa | Saadaasha Shabakadda
Haddii aad waligaa fursad u hesho inaad u safarto meel qabow sida qaaradda Antarctic, oo haddii aad ku dhiirratid inaad gasho biyaha, aad u taxaddar. Waxay u badan tahay inaad la kulanto duufaanno badeed, oo lagu yaqaan magaca brinicle, ama gacanta dhimashada.
Waa muuqaal qurux badan, laga yaabee kan ugu yaabka badan dhammaan kuwa ka dhaca badaha. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u samaysan tahay?
Meeraha Dunida, wax walba wali lama helin, runtiina, ma ahayn ilaa 1960 in la ogaa in brinicle runti jirtay, iyo 2011 waxaa laga duubay markii ugu horreysay waqti-lumis. Laakiin waa maxay Hagaag, ifafaaladan xiisaha leh runtii waa baraf barafoobay oo ka samaysma biyaha Antarctica sababo la xiriira farqiga u dhexeeya heerkulka labadaba dusha sare (oo qiyaastii ah -20ºC) iyo qoto dheer (laga bilaabo - 2 ° C). Marka qulqulka biyaha cusbada leh, oo heerkulkoodu yahay dhowr darajo oo ka hooseeya eber, wuxuu la xiriirayaa biyaha badda, oo ka sii kululaanaya, sidaas awgeedna barafka loo yaqaan 'stalactite' ayaa la sameeyay.
Marka ugu horeysa waxay aad u xasuusisaa tuubbo godan oo baraf ah oo kor u sii kacaya. Gudaha gudihiisa, waxaa ku jira biyo kaas oo ah aad u qabow iyo inay leedahay milix badan, oo ku urursan kanaallada. Marxaladani waa qaab jilicsan, maaddaama darbiyadu dhuuban yihiin oo ay u baahan tahay inay "ku quudiso" cusbada si ay u sii wadato koritaanka. Si kastaba ha noqotee, si tani u dhacdo, shuruudaha waa inay ahaadaan sida soo socota:
Biyaha ku wareegsan tuubada waa inay yara yaraadaan cusbada yar ka badan kan gudaha ku jira.
Biyo ma noqon karto mid aad u qoto dheer.
Biyaha aagga waa in la ilaaliyaa deji.
Haddii xaaladuhu sax yihiin, waxaad ka bixi kartaa salka oo aad tagtaa waddo dheer oo hoos u dhac ah. Dhanka kale, waxay ka tagi doontaa shabakad baraf ah oo sameyn doonta waxa ugu fiican ee ay qabato: qaboojiso wax kasta oo jidkeeda ku jira, ha ahaato xiddigo ama urchins badda, kalluunka, kalluunnada ... Haddii kale, si fudud wuu libdhi doonaa.
Intaas waxaa sii dheer, "gacanta" waa mid aad u qabow oo aad u cufan oo kolba marka ay sii socoto aan lumin xasilloonida, sidaa darteed waxay ilaalisaa qaabkeeda oo xitaa weyneysaa cabbirka markay badda geleyso, maadaama ay leedahay lakab dahaadh ah oo ay samaysay diyaaradda biyo cusbada cusbada oo qulqulaya. Lakabkaan ayaa ka hortagaya kuleylka, sidaa darteed wuxuu sii wadi doonaa inuu soo dego oo uu abuuro baraf badan. Tani waa sababta oo ah cusbadu waxay keentaa in barta barafku hoos u dhacdo… dheeraad ah. Sidaa darteed, brinicle-ka ayaa sii xoogaysanaya, ka sii yaab badan haddii ay suurtagal tahay.
Waana in cusbadu, halka brinicle-ka ay sii socoto barafowga, ay ka soo baxdo sameysmo la sheegay, taasoo keeneysa in biyaha ku xeeran ay noqdaan kuwo cusbo badan. Waa la dhihi karaa, mana lagu qaldan doono, in ifafaalahaani "quudinayo" cusbada, sidaa darteed marar badan ayuu wareegga dib u bilaabmi doonaa ... illaa ay isbeddello waaweyn ka dhacayaan heerkulka ama qoto dheerka badda.
Cabirka brinicle waa xaddidan. Waxay ku xirnaan doontaa biyaha ku hareeraysan, qoto dheerida biyaha, iyo sidoo kale koritaanka barafka midba midka kale haysto. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa wax lala yaabo.
Qaabkan waxaa markii ugu horreysay laga duubay 2011, Jasiiradda Razorback, Antarctica, waxaa sameeyay Kathryn Jeffs iyo kaamirooyinka Hugh Miller iyo Doug Anderson ee BBC. Heerkulka badda wuxuu ahaa qiyaastii -2ºC, laakiin waxay ku dhiiradeen inay ku quustaan ​​dharka saxda ah, geesinimadoodana shaki la’aan abaalgud baa ku heshay awood. duub mid ka mid ah ifafaaleyaasha dabiiciga ee cajiibka ah ee lagu arkay Dhulka, gaar ahaan badda la qaboojiyey ee ah meel aad u cajaa’ib badan Antarctica.
Sidaa darteed, dusha sare ee barafku ku daboolan yahay halkaasoo olalaha badda, libaaxyada badda, penguins iyo xayawaanada kale ay ku dhex socdaan hawl maalmeedkooda iyagoo raadinaya wax ay cunaan, diyaaradaha dagaalka ee barafka leh waxay la xiriiraan bada taas oo si fiican waa qabow, waa kuleyl ku filan waxa loogu yeero duufaanada badda, oo sifiican loogu yaqaan magaca brinicle ama farta dhimashada.
Weli wax badan ayaan ka baranaynaa dabeecadda, waxayna u badan tahay inay weli in ka badan hal la yaab nagu hayso. Lama oga goorta uu bini aadamku arki doono show sidan oo kale ah mar kale, waxa la ogyahay ayaa ah in marka uu arko, mar kale la yaabi doonaa.
Maxay kula tahay Xiiso leh, sax? Brinicle-gu si dhakhso leh ayuu u socdaa, isagoo jiidaya wax kasta oo uu ku arko. Marka hadaad waligaa fursad uhesho inaad aragto mid kudhow, ku raaxayso… laakiin meel fog, haddiiba ay dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Brinicle ama farta dhimashada, duufaanka badda
WAA MUHIIM IN SI Qoto Dheer LAGU TAGO MAHADSAN MAHADSANID WAX WALBA
Qaab dhismeedka jawiga dhulka
Farqiga u dhexeeya cimilada saadaasha hawada iyo xiddigiska